Akụkụ akụkụ - Shenzhen PhiliFast Electron Limited
PHILIFAST na-enye ọrụ elektrọnịkị ihe eji arụ ọrụ BOM dabara adaba, nwere usoro ọkọnọ akụrụngwa na-arụ ọrụ nke ọma, ma na-achọpụta nzukọ PCB dị ọnụ ala maka ndị ahịa.
Anyị nwere ndị otu injinia BOM ọkachamara ka ha nyochaa data mbụ nke ndị ahịa BOM.
Ndị otu ahụ nwere ahụmịhe ọtụtụ afọ na njirimara akụrụngwa elektrọnik, nyocha nkwakọ ngwaahịa PCB, wdg, na ha nwere ike ịchọta nsogbu akụrụngwa na BOM mbụ tupu oge eruo.
Dịka ọmụmaatụ, ma ụdị akụrụngwa emezuola, ma ngwugwu akụrụngwa ya na PCB pad, ma nọmba akụrụngwa doro anya, wdg, anyị ga -anwa ike anyị niile iji nyere gị aka iwepu nsogbu akụrụngwa ọ bụla tupu ịnye iwu.
Iji hụ na ihe atụ nke akụkụ mkpado ọ bụla dị na BOM doro anya, n'otu oge ahụ, anyị ga -eji akara nke ngwa ahụ n'ụzọ doro anya, anyị agaghị eji ihe nnọchi anya amabeghị na -enweghị ikike onye ahịa.
Maka ihe ndị na-adịghị mkpa, anyị ga-enye ihe nhọrọ ọzọ maka ntụnyere ndị ahịa iji belata ọnụ ahịa ndị ahịa.
PHILIFAST na-azụta ngwa elektrọniks mbụ sitere n'aka ndị na-eweta ngwaahịa dị elu na ndị na-ekesa ụwa iji hụ na ahụmịhe ọgbakọ PCB dị elu.
Companylọ ọrụ anyị ewepụtala nkwado ogologo oge na ndị na-ekesa akụrụngwa elektrọnik, gụnyere Arrow Electronics, Avnet, Digi- Key Electronics, Farnell Company, Future Electronics, Mouser Electronics, Newark na Samtec.
Ịzụta ihe dị iche iche bụ isi ihe ga -eme ka ọrụ a gaa nke ọma. Ogo nke otu akụkụ ọ bụla ga -emetụta arụmọrụ nke ngwaahịa PCB niile. Ngwongwo akụrụngwa zuru oke mba. naanị na -enyere anyị aka ịzụta ihe ndị dị ụkọ n'ahịa, mana na -ekwe nkwa nnyefe ziri ezi.
Iji nyere aka belata ọnụ ahịa akụrụngwa yana belata oge ndu, anyị na -echekwa ihe karịrị 8000+ ihe ndị na -emekarị site na ndị nrụpụta mma. Anyị na -ekwe nkwa akụkụ anyị ma gbaa gị ume ịhọrọ site na ngwaahịa anyị.
Maka ndị na -emegide ihe, capacitors, diodes, wdg, ụlọ ọrụ anyị nwere ebe nchekwa echekwara iji dozie mfu nke ihe ndị a kpatara na usoro mmepụta, wee zere igbu oge na nnyefe nke mfu akụkụ kpatara.